Amiirka Kuweyt oo kala diray baarlamaanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldAmiirka Kuweyt oo kala diray baarlamaanka
October 16, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Baarlamaanka dalka Kuweyt. [Sawirka: Reuters]
Kuweyt-(Puntland Mirror) Amiirka Kuweyt Shiikh Sabaax Axmad Al-sabaax ayaa soo saaray digreeto uu ku kala dirayo baarlamaanka dalka, si doorashada loo qabto xilli hore.
Wakaalada wararka dowlada ee KUNA ayaa baahisay ogeysiinta maanta oo Axad ah kadib kulan deg deg ah oo ay dowlada yeelatay.
“Amiirka waxaa uu sheegay iyada oo la ogyahay xaaladaha gobolka…. Iyo caqabadaha amaanka… waxa uu amray in 50-ka xubnood ee sharci-dajiyeyaasha ah laga la diray.” Bayaanka ayaa sidaa lagu yiri.
Amarka ayaa imaanaya 24-saac kadib markii afhayeenka baarlamaanka Marzouk al-Ghanem uu ku baaqay doorasho deg deg ah sababtoo ah dalka oo wajahaya caqabado amaan iyo mid dhaqaale.
Ma jirto wakhti loo qorsheeyay doorashooyinka cusub. Laakiin sida uu qorayo dastuurka dalka, doorashooyinka waa in ay ku dhacaan labo bilood gudahood kadib marka baarlamaanka laga la diro.
Kuweyt, ayaa ah dal kamid ah kuwa ugu weyn ee soo-saara saliida, sanadkii 2013-kii ayaa la qabtay doorashadii ugu dambaysay ee baarlamaanka.
Dalka ayaa fadhiya marin istiraatiiji ah oo u dhaxeeya Sucuudiga iyo Ciraaq iyo gacanta ka yimaada Iran.
Kuweyt ayaa waxaa maamuulayay qoyska reer Al-Sabaax tan iyo 1750.